नेपाल कहाँ,कसरी घुम्ने ? नेपाल दर्शन २०२० हेर्नुस् - ६ माघ २०७६, NepalTimes
नेपाल कहाँ,कसरी घुम्ने ? नेपाल दर्शन २०२० हेर्नुस्
६ माघ, काठमाडौँ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहले फोटो पुस्तक ‘नेपाल दर्शन २०२०’ सार्वजनिक गरेको छ । फोटो पत्रकार समुहले सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचार प्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित गरिएको यो पुस्तकमा नेपालको संस्कृति तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित फोटोहरु समावेस गरिएको छ । पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगश भट्टराईले नेपाल किन घुम्न जाने भन्ने प्रश्नको जवाफ यो पुस्तकले दिने बताए । मन्त्री भट्टराईले पर्यटकहरुलाई नेपालको कुन ठाउँ घुम्न जाने भन्ने निर्णय लिन समेत पुस्तकले सहयोग पु¥याउने बताए ।
मन्त्री भट्टराईले २०२० लाई आधार वर्ष मान्दै २०३० नेपाल भ्रमण वर्षको एक दशकको अभियान सञ्चालन गर्न लागिएकोले यो पुस्तकको महत्व झन बढी हुने बताए । फोटो पुस्तक ‘नेपाल दर्शन २०२०’ मा सातै प्रदेशका फोटोपत्रकार तथा फोटोग्राफरहरुमार्फत लिइएका उत्कृष्ट फोटोहरु समावेश छन् । कार्यक्रममा उत्कृष्ट भएका फोटो पत्रकार तथा फोटोग्राफरहरुलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो ।